हिमाल खबरपत्रिका | गरीबी निवारण कोषमा भाँडभैलो
सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ह्याक हुँदा कोषले देशभरिका ६२ जिल्लाका ३२ हजार गरीब तथा पिछडिएको समूहहरूसँग गरेको सम्झौता, कारोबार र लगानी विवरणको एउटा भाग नै गुमेको छ । प्रत्येक समूहले कोषबाट सरदर साढे ४ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । यति ठूलो कारोबारको विवरण गायब हुँदा पनि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृत मोहन जिसीलाई सोही पदमा यथावत् राखिएको छ । उनलाई यसअघि दिइएको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको अतिरिक्ति जिम्मेवारी मात्र खोसिएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले जिसीलाई १० जेठदेखि लागू हुनेगरी अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक केसी र कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाका ‘विश्वासपात्र’ जिसीलाई सूचना लुकाउन एउटै कार्यालयमा दुई विभागको जिम्मेवारी दिइएको कोष स्रोत बताउँछ । केसीले २९ भदौमा जिसीलाई लेखेको नसिहतमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृतका रूपमा मात्र काम गर्न भन्दै पत्रको अन्तिममा ‘कोषको नीति–नियम अनुसार काम गरेकोमा धन्यवाद’ उल्लेख छ ।
कोषको आर्थिक गतिविधिको विद्युतीय विवरण ह्याक हुनुभन्दा एक साता अघिदेखि कोषका सबै विभागका कम्प्युटरहरूको आन्तरिक नेटवर्क टुटेको थियो । भाइरस लागेको भनिए पनि सुधार वा सुरक्षाको कुनै प्रयास नगरिएको र भाइरसले ह्याक गर्ने जान्दाजान्दै कम्प्युटरमा रहेको विवरण गुमाइएको कतिपय कर्मचारी बताउँछन् । एक अधिकृत भन्छन्, “एकाएक शंकास्पद रूपमा कारोबार र अनुदान रकमको विवरण गुमेको छ, तर कार्यकारी निर्देशकले छानबिन गर्न ध्यान दिइरहेका छैनन् ।” कोष मार्फत कतिपय फर्जी संस्था तथा व्यक्तिका नाममा रकम पठाइएका कारण हिसाब मिलाउन विवरण गायब पारिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गर्न कोषलाई निरन्तर ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि कोषले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रु.३ करोड १ लाख ११ हजार ६८५ बराबरको विवरण पठाएको छ । यस्तै, सम्परीक्षणका लागि कोषले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रु.८ करोड ४९ लाख ९२ हजार ९४४ को विवरण बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र महालेखामा पठाइएका दुवै विवरण स्वीकृत भएछ भने पनि कोषको कुल बेरुजुको अझै ५६ प्रतिशत अर्थात् रु.१४ करोड ४० लाख ९५ हजार ९१३ फस्र्योट हुन बाँकी रहन्छ ।
गरीबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगसाथ कारबाहीको माग गर्दै कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १७ पुस २०७३ मा २२ बुँदे पत्र पठाएका थिए । सो पत्रमा २९ सेप्टेम्बर २०१५ मा २२ जिल्लामा कोषका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न विज्ञापन खोलिएकोमा कार्यकारी निर्देशक केसीले वैकल्पिक सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानून विपरीत अन्य जिल्लामा नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।
कोषमा आर्थिक अनुशासनहीनता असरल्ल छ नै, यौन हिंसाको घटना पनि पटक–पटक देखिएको छ । गएको ४ असारमा कोषका उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाले कोषका ९ जना अधिकृत सम्मिलित बैठकमा महिलाहरूबारे अपशब्द बोलेका थिए । बैठकमा दुई जना महिला अधिकृत पनि सहभागी थिए । तर, कसैले त्यस विरुद्ध बोल्ने आँट गरेनन् । डेढ महिनापछि २० साउनमा कोषकै एक जना सहायक स्तरकी महिला कर्मचारीले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई संयुक्त पत्र लेखेर उपाध्यक्ष डा. थापाले गरेको यौनजन्य हिंसाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । सो खबर सार्वजनिक भएपछि डा. थापाले २० भदौमा घरायसी कारण देखाउँदै पदबाटै राजीनामा दिए ।